JIRAMA SAMBAVA : Hahazo milina vaovao hanafoanana ny delestazy amin’ny 16 jolay ho avy izao
Mitohy hatrany ny delestazy ao Sambava noho ny fahasimban’ny milina mitsinjara izany amin’ny mpanjifa. 9 juillet 2018
Tsy afa-manoatra araka izany ny vahoaka ao an-toerana ka ny mitaraina ihany no fara-hevitra. Manoloana ny zava-misy dia nanao fanambaràna ny avy amin’ny orinasa Jirama amin’ny fahatongavan’ny milina miisa telo hamahana ny olana misy.
Niala tsiny sady nampahafantatra tamin’ny vahoakan’i Sambava mpampiasa herinaratra izay miaina ao anatin’ny delestazy ankehitriny amin’ny fahazoana milina vaovao ireo tompon’andraikitra.
Araka ny voalaza dia efa niala any Antananarivo ny zoma 6 jolay teo ireo milina ireo. Izay ezahina ho tonga ao Sambava amin’ny 16 jolay ho avy izao ireo fitaovana vaovao ireo ho solon’izay simba nampanahirana ny mpanjifa. Andrasana araka izany ny fahatongavan’ireo milina ireo, mba hamahana ny olan’ny delestazy mianjady amin’ny vahoakan’i Sambava amin’izao.